Dhacdooyinkii Ugu Xiisaha Badnaa Ee Ku Lammaanaa Doorashadii Kenya Ka Dhacday 8-dii Augus 2017 | Ogaalnews
Dhacdooyinkii Ugu Xiisaha Badnaa Ee Ku Lammaanaa Doorashadii Kenya Ka Dhacday 8-dii Augus 2017
August 12, 2017 | Published by: admin
Nairobi, , 12 August, 2017(Ogaal):- Doorashadii ka dhacday Salaasadii toddobaadkan, ayaa noqotay doorashadii ugu xiisaha badnayd deegaannada waddanka Kenya qaar ka tirsan dhacdooyinka laga soo tabiyey marka loo eego. Waxaanay arrimaha ugu xiisaha badani noqdeen Hooyo iyo Wiil ay dhashay oo Hal Kursi ku wada tartamay Xildhibaannimada Baarlamaanka Kenya, halka Xildhibaannada guulaystay uu ku jiro 23 Jir Dugsiga sare wax ka barta.
Hooyo iyo Wiil ay dhashay oo Hal Kursi ku wada tartamay;
Xildhibaan Beatrice Kones oo ah Hooyo Sharraxnayd, ayaa Wiilkeeda Curad oo lagu magacaabo Kipkalya Kones kula tartantay Kursiga Baarlamaanka ee Bariga Bomet ee Koonfura dalka Kenya, ugu danbeyntiina waxay natiijadu noqotay in Wiilkeeda ay ka guulaysato oo ay Kursiga Hooyadii ku fadhiisanayso.
Wiilka oo kaalinta Afraad ka galay tartanka, ayaa sheegay in Hooyadii ay hore ugu ballan-qaaday in ay isaga taageeri doonto doorashada 2017-ka, isla markaasina la soo gaadhay xilligii uu Riyadiisa ka dhabayn lahaa. “Nooma dhaxeeyo wax farqi shaqsiyadeed ah, manaannaan murmin Hooyaday, waayo waa Hooyaday, waxaanay sii ahaan doontaa Hooyadey.” Sidaa ayuu yidhi Kipkalya Kones.
Arday Dugsiga sare dhigta oo Xildhibaan Baarlamaan noqday;
Geesta kale, John Paul Mwirigi, ayaa noqday Xildhibaankii ugu da’da yaraa ee loo soo doorto Baarlamaanka Kenya ka dib markii uu ku guuleystey doorasho ka dhacday Igembe Koonfureed. Wiilkan ayaa si ka duwan dadka kale olalihiisa doorasho u sameeyay, isaga oo dadka guryaha ugu tagayay kana dalbanayay in ay codkooda siiyaan.
John Paul Mwirigi oo ka warramaya wixii ku dhaliyey riyadan uu ku guulaystay ee Xildhibaannimo isaga oo Dugsiga sare weli dhigta, waxa uu yidhi; “Waxaan lahaa riyo ah in aan mooshin horgeeyo baarlamaanka aniga oo ah fasalka sedexaad ee dugsiga sare, markaas ayaanan bilaabay in ardayda iskuulka ila dhigta aan ka codsaday in ay ii ololeeyaan marka la gaaro sanadka 2017-ka. “Xil hoggaan ayaan hore oga qabtay Iskuulkayga.” ayuu yidhi John Paul Mwirigi.
Dadka taageerayaashiisa ah ayaa sheegey in ay isaga doorteen maaddaamaa ay uu isaga ogyahay dhibaatooyinka ay qabaan. Haweenka ayaa la leeyahay guul weyn ayeey ka gaareen doorashada sanadkan 2017-da iyagoo maalaha qaar ragga uga adkaaday tartan ay wada galeen. John ayaa helay 18,867 cod, isagoo ka adkaaday Musharraxa Xisbiga Jubilee Rufus Miriti oo isna helay 15,411 cod. Ardaygan ayaa la sheegay inuusan olole doorasho ah sameynin, isagoo aan awoodin Kharashka ololaha doorashada, laakiin wuxuu ku dhaqaaqay tallaabo aan hore loo arag, wuxuuna lugtiisa ku tegay Guri kasta si uu cod uga helo.
Soomaaliyad markii u horreysay Xildhibaan ka noqotay Kenya;
Sidoo kale, Gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee Xildhibaan ka noqota Kenya, ayaa siddeeddii bishan la doortay, taas oo ah Safiya Cabdi Nuur oo noqotay Haweenay kasoo jeeda gobolka Waqooyi-bari ee Soomaalida Kenya oo ka mid noqotay Baaralamaanka iyadoo ka adkaatay Ninkii ugu dhawaa ee la tartamayey.
Safiya oo ka tirsan Xisbiga PDR, ayaa laga doortay deegaanka Ijaara ee Ismaamulka Gaarisa, waxaanay tartan adag la gashay Axmed Ibraahim Cabaas oo kula tartamayey Kursiga Xildhibaannimo, waxaanay heshay 6,0001 Cod halka Axmed uu helay 5705 cod.
Musharraxiin Rikoodh-cusub dhigay;
Musharrax waliba olole xooggan ayuu sameynayey doorashada ka hor, si loogu doorto xilalka ay doonayaan, laakiin waxaa kordhay tirada Xubnaha aan Xisbiyada ka tirsaneyn ee iyaga oo aan fileyn la doortay. Waxaa ka mid ah Mohamed Kuti iyo Ndiritu Muriithi, kuwaas oo taariikh cusub dhigay, kadib markii ay noqdeen labadii Musharrax ee ugu horreeyay ee iyagoo aan Xisbi katirsaneyn loo doortay Xildhibaanno Baarlamaanka cusub ee Kenya ka mid.
Xildhibaan Kuti, ayaa Ninkii kula tartamayey Kursiga Isiolo kaga adkaatay codad dhan 20,348 waana tiro aad u badan, waxaana Ninkii la tartamayay uu ahaa Godana Doyo oo helay 13640 cod. Deegaanka Laikipia, waxaa Xildhibaan looga doortay Nin aan Xisbi ka tirsaneyn oo lagu magacaabo Ndiritu Muriithi. Xildhibaan Muriithi, ayaa qaraabo la ah Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Mwai Kibaki, waxaanu helay codad dhan 98,233.
Waardiye Xildhibaan Noqday;
Sargaal ka tirsanaa Ciidammada Booliska Kenya, ayaa isaguna u tartamay Xildhibaannimo, Ninkaas oo lagu magacaabo Nyenze, ayaa noqday Xildhibaanka Galbeedka Kitui, halkaas oo uu muddo Askarinnimo kaga shaqeeyey.
Maaha wax ku cusub Siyaasadda Kenya in Nin Waardiye ama ilaaliye Boolis ahi uu ka mid noqdo Xildhibaannada dalka Kenya, laakiin taas ayaa muujineysa in Dadka wax dooranayaa aanay Lacag iyo Laaluush midna wax ku dooran ee ay eegaan dhinacyo kale, ta Qabiilku-ba ha ugu badnaato sida la sheegee, haddana waxa muuqata inay dhammaan Xubnaha aynu halkan ku soo qaadannay ee dhacdooyinka indhaha Warbaahinta soo jiitay ee doorashada Kenya ku lammaanaa ay la tartameen Dad ka magac iyo manfacba roon oo Dhaqaale badan ololohooda ku bixinayey.